Ciyaaryahanka cusub ee Arsenal Perez "waa laacib xirfadyahan u ah Arsenal" - BBC News Somali
Ciyaaryahanka cusub ee Arsenal Perez "waa laacib xirfadyahan u ah Arsenal"
Image caption Lucas Perez, weeraryahanka cusub ee Arsenal
Weerar yahanka cusub ee kooxda Arsenal ay lasoo wareegtay ee Lucas Perez waxa uu diyaar u tahay inuu "ciriiri geliyo" difaacyahanada horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan. Sidaasi waxaa sheegay saaxiibkiisa cusub ee Shkodran Mustafi.
Labada laacib waxay Arsenal soo gaareen maalintii ugu dambeysay ee uu xirmayay suuqa kala wareegsiga ciyaaryahanada. Waxaa laga kala keenay Deportivo iyo Valencia.
"Kuma raaxeysto in laga hor yimaado," ayuu yiri Mustafi oo kasoo jeeda Jarmalka. Wuxuu intaa ku daray, "Waa weeraryahan wanaagsan, waxa uu haystaa waxkastoo weeraryahan uu u baahan yahay. Waa qof aad si wanaagsan ula ciyaari karto".
"Waxa uu xilliga saxda ah joogaa meesha ugu wanaagsan, sida uu muujiyay xilli ciyaareedkii hore ee La Liga. Halkaasi waxaa ka ciyaarayay laba sano waana ogahay inay adagtahay in goolal badan laga dhaliyo La Liga, sababtoo ah halkaasi waxaa jooga difaacayaal wanaagsan", ayuu tilmaamay ciyaaryahan Mustafi.
Muuqaal Xiritaanka ciyaaraha olimbiga ee Rio ayaa ku dhamaaday xaflad wayn oo socotay ku dhawaad saddex saacadood
Ciyaaraha kubada cagta ee gabdhaha ee Olibikada ka furmay Rio
3 Agoosto 2016